Raw Bromelain ntụ ntụ hplc =98% | Osisi AASraw wepụ ntụ ntụ
/ ngwaahịa / Osisi wepụ / Bromelain ntụ ntụ
Rating: Category: Osisi wepụ
AASraw nwere njikọ na mmepụta ikike site na gram ka usoro nchịkọta nke Bromelain ntụ ntụ, n'okpuru ụkpụrụ CGMP na usoro nchịkwa mma.
Bromelain bụ protein wepụtara site na mkpị nke pineapples, ọ bụ ezie na ọ dị n'akụkụ nile nke osisi ọhụrụ na mkpụrụ. Ihe odide ahụ nwere akụkọ ihe mere eme banyere ọgwụ ndị mmadụ. Dika ihe ndi ozo, o nwere ike jiri ya mee ihe dika ndi na-aru anu aru, n'ime otutu ndi mmadu na ndi oru nyocha iji mee ka ndi mmadu nwee oria.
Bromelain ntụ ntụ video
Raw Bromelain ntụ ntụ isi Characters
aha: Bromelain ntụ ntụ
Raw Bromelain ntụ ntụ eji
Bromelain Raw ntụ ntụ aha
Bromelain makwaara dịka enzymes enia, eniamesia enzymes.
Bromelain Raw ntụ ntụ Bromelain Usage
Ọ dịghị onye a tụrụ aro na usoro onunu ogwu.
Ịdọ aka ná ntị na Bromelain raw ntụ ntụ
Bromelain adịghị egosi na ndị ọkà mmụta sayensị na-arụ ọrụ n'ịgwọ ọrịa ọ bụla ọzọ, na United States Food and Drug Administration adịghị anabata ya maka ịgwọ ọrịa ọ bụla. Na United States, usoro Iwu Nlekọta Ahụike na Mmụta Dietary (DSHEA, 1994) na-enye ohere ịzụta ihe oriri na-eri nri bromelain ọ bụ ezie na arụmọrụ adịghị edozi.
Raw Bromelain ntụ ntụ Ntuziaka ọzọ
Tinyere papain, bromelain bụ otu n'ime nchedo kachasị ewu ewu iji anụ anụ. A na-ere Bromelain na mpempe powdered, nke jikọtara ya na marinade, ma ọ bụ na-efesa ya na anụ a na-adịghị eri.
Esi zụta Bromelain ntụ ntụ si AASraw